Talyaaniga oo qalab caafimaad gaarsiiyay MCH Kaaraan ku yaala-Sawirro – Radio Muqdisho
Talyaaniga oo qalab caafimaad gaarsiiyay MCH Kaaraan ku yaala-Sawirro
Qalabkan caafimaad ee maanta dowlada Talyaaniga ugu deeqay xarunta hooyada iyo dhalaanka MCH ee degmada Kaaraan ayaa waxaa mas’uuliyiinta Talyaaniga waxaa ay sheegeen in ay ugu gol leeyihiin caawinta shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan hooyada iyo dhalaanka.
Guddoomiyaha degmada Kaaraan oo kamid ahaa mas’uuliyiintii goob jooga ka aheyd wareejinta qalabkan caafimaad ayaa dhankiisa u mahadceliyay dowladda Talyaaniga taageerada ay soo gaarsiiyeen dadka ku dhaqan degmada Kaaraan.
Cumar Meyre Macow, oo ah guddoomiyaha degmada Kaaraan ayaa sidoo kale sheegay in ay mahad weyn ugu hayaan dowladda Talyaaniga iyo saraakiisha qalabka soo gaarsiisay maanta, isagoo xusey in loogu adeegi doono dadka loogu talagalay.
Korneel Bernardo oo kamid ah saraakiisha dalka Talyaaniga ka socda oo qeybta ka ah howlgalka midowga Yurub ee jooga Soomaaliya waxaana uu sheegay u jeedkoodu yahay in ay gacan ka geystaan kor u qaadida caafimaadka hooyada Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Bankiga dhexe oo xaqiijiyay in $530,000 laga xaday Bankiga
War deg deg Weerar iyo qaraxyo laga maqlay Xeebta Liido.